Daawo Sawirrada: Xafladda caleema saarka madaxweynaha Jabuuti – Radio Muqdisho
Daawo Sawirrada: Xafladda caleema saarka madaxweynaha Jabuuti
Xaflad balaaran oo lagu caleema saarayay Madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ka dhacday magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti.
Madaxda ka qeybgashay xafladda caleema saarka madaxweynaha Jabuuti waxa ka mid ahaa Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Sudan, Madaxweynaha Rwanda, Madaxweyne ku Xigeenka Uganda, Ra’iisal Wasaaraha Ethiopia, Wakiillo ka kala socday qaar ka mid ah waddamada Caalamka iyo marti sharaf kale.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa lagu dhaariyay xafladdaasi oo ka dhacday guriga ummadda waxa uuna ballanqaaday in uu si wanaagsan oo caddaalad ah uu ku hoggaamin doono ummadda reer Jabuuti.
Madaxweyne Geelle ayaa ku guuleeystay doorashadii madaxtinimada ee dhawaan ka dhacday dalkaasi Jabuuti.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka oo ka hadlay wax u qabashada barakacayaasha